Akhal-Teke, ilay karazan-javamaniry dia nihevitra ny firavaka tao Turkménistan | Soavaly Noti
Ny hazakazaka Akhal-Teke, dia tsy eo amin'ny ankamaroan'ny lisitr'ireo soavaly tsara tarehy indrindra eto an-tany, fa izany tokoa noheverina ho ny karazana Equine tsara tarehy indrindra misy izany. Zavatra iray noho ny palitao mahatalanjona sy ny endriny miadana.
Izy ireo koa equines mety amin'ny fitsipi-pifehezana soavaly isan-karazany, miavaka indrindra amin'ny hazakazaka fiaretana sy amin'ny fifaninanana mitaingin-tsoavaly tanteraka.
Saingy tsy izay ihany fa ilay karazany itiavan'ny miaramila sy ny mpanjaka manomboka any Kazakhstan ka hatrany Sina. Fantatra aza fa i Alexander the Great dia nitaingina ny Akhal-Teke teo alohany tamin'ny adiny.
Te hahafantatra azy ireo bebe kokoa ve ianao?
1.1 Ny famirapiratana mampiavaka ny kapaon'ny Akhal-Teke
Miatrika soavaly tiorka fiavianay izay fahaiza-manao hazakazaka tena tsara, izay mampiseho hetsika tsara, un jumper mahafinaritra ary an'iza fanoherana mendrika asongadina. Tamin'ny hazakazaka fiaretana 500 km izay notontosaina tany Russia dia teo amin'ny toerana ambony foana io karazany io.
Na dia marina aza izany amin'izao fotoana izao karazany io ampiasaina indrindra amin'ny akanjo sy mitsambikina izay nahitana fa manana ny fahaizany lehibe izy ireo.
Tsy dia fantatra loatra ny momba ny fiakarana sy ny fiandohan'io karazany io. Io zava-misy io, miaraka amin'ny fisehoana manaitaitra an'ireo môtôzy ireo, dia nampalaza azy ireo ho soavaly mistika. Izy ireo dia raisina ho iray amin'ireo karazana tranainy indrindra eto an-tany, satria izy io Nihalehibe nandritra ny taonjato maro ny foko Teke, ao amin'ny Akhal oasis ao amin'ny efitra Karakum any Turkménistan. Ny karazana dia niova fanovana isan-karazany momba ny anarany, nefa mbola fantatra amin'ny anarana hoe «ny soavaly selestialy"Na"ny firavaka ao Turkménistan".
Biby izay tsy azo atao raha tsy eo ny adjectives: mahia sy kanto. Miaraka amin'ny haavony izay manodidina 160cm amin'ny lahy ary 155 cm amin'ny vehivavyEo alohan'ny soavaly misy tsipika lava isika. Manana a lava tendany lava indraindray dia manana endrika 'S' manome fiatraikany amin'ny loha. Ny lamosina dia lava ny halavany, mahia, izay misy marika be dia be.
La loha maivana sy mahia, manana maso lehibe sy maneho hevitra, ary tsara sofina misandratra avo, lava koa.
Ny hozatra dia matevina ao ambanin'ny a hoditra manify be ary palitao nefa tsy isalasalana fa manaitra. ny vitsy ny volo sy ny manaAry koa, matetika izy ireo dia tsy manana volo maro mankany amin'ny tarehy ho toy ny sisiny.
Raha ny toetra amam-panahy dia a karazana herimpo lehibe, tsy fivadihana ary fahatsapana. Ny toetrany voajanaharin'ny voajanahary dia nampiononin'ireo Turkmen mba hahafahany mahazo an'ity karazany ity ny fahaizany feno, hahatratrarana ny sasany henjana sy matanjaka mitovy, mamorona fifamatorana akaiky eo amin'ny soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly.
Mitovy amin'izy ireo izy ireo voalaza fa amin'ny mpitaingina azy eo ambony no mankatoa sy manaja fa rehefa nidina avy any dia sarotra tanterahina.
Ny famirapiratana mampiavaka ny kapaon'ny Akhal-Teke
Andao izao hiresaka momba ny palitao tsy manam-paharoa amin'ity karazany ity, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo zavatra manintona ny saina indrindra raha vao jerena.
Afaka manolotra izy ireo karazana sosona: loko fototra, dily dun sy crème, palitao liarts sns.
Ireo menaka fanosotra, palomino na palitao-bay, matetika, dia mampiseho loko metaly izay manome azy ireo ny fisehoan'ny volo amin'ny vatana volamena. Ao amin'ny soavaly fotsy, liarts fotsy, perla ... Toy izany koa no mitranga fa ny fahatsapana dia ny volo volafotsy.
Izany no mahaliana Satria ny proteinina palitao dia mamoaka an'ireto vy metide ireto rehefa milatsaka eo aminy ny hazavana.
Na dia ny santionany amin'ny ny loko maizina dia tsy mampiseho ireo iridescences ireo raha manana gloss ambony amin'ny palitao izy ireo.
Mahatonga izany ny sosona tena sarobidy sy irina indrindra dia ny albino sy cremellas, izay manana taratra volafotsy sy perila metaly vitsivitsy. Ary mazava ho azy ny palominos miaraka amin'ny vokatra volamena tsy mampino izay omen'ny 'gèème crème' azy ireo, ary iantsoana ireo biby ireo ho 'ny soavaly misasa volamena'.
Voalaza fa ny Akhal-Teke voalohany tonga tany Amerika dia iray tamin'ireto farany ary an'ny Elizabeth mpanjaka avy any Espana izy io. Nanomboka teo dia nanjary malaza tany Amerika io karazany io.
Anarana Akhal Teke, dia avy amin'ny firaisana amin'ny anaran'ny a faritra jeografika: Akhal, ary ny Teke, foko Turkmen.
El loharano amin'ity karazany ity dia toa amin'ireo soavaly nonina an'ity faritra Akhal ity, any atsimon'ny Turkménistan ankehitriny, tokony ho 3000 taona lasa izay.
Inoana fa avy amin'ny soavaly nentin'ny Skytianina izy ireo, izay olona voalohany nahafehy ny kanton'ny soavaly.
Ny sisa tavela amin'ny arkeolojika hita tao amin'ny Altai massif sy teo amin'ny toerana misy an'i Turkménistan ankehitriny, dia mampiseho taolam-biby izay manana toetra mampiavaka ny morpholojika dia mitovy amin'ny hazakazaka Akhal-Teke ankehitriny.
Ny foko Turkmen izay nanolo-tena tamin'ny fiompiana soavaly, azo inoana fa nonina ny Altai Mountains izy ireo talohan'ny nitoerany teo an-tsisin'ny efitr'i Kara Kun, Persia, Anatolia ary Syria.
Ireo soavaly natsangany ireo dia fantatra amin'ny anarana isan-karazany, toa an'i Niseus.
Ny vondrona ara-poko Teke nandeha nanao dia lavitra izy mba hangalatra sy hisamborana andevo tany atsimo, ary soavaly roa no nentin'izy ireo isaky ny Teke: ny iray ho an'ny mitaingina purebred ary ny iray ho entany. Nisafidy sy nitazona ny firazanan'ireo soavaly tsara indrindra izy ireo, izay fomban-drazana dia tsy namidy mihitsy.
Ao amin'ny Taonjato faha-XIX, ny tafika rosiana, niseho tany amin'ireo tany ireo, mamela an'i Turkmenistan mifangaro ary eo ambany fifehezan'ny Rosiana tanteraka.
Ny Rosiana indrindra no hanomboka hiteraka ny Akhal-Teke ao amin'ny toeram-piompiana stud izy ireo.
Ny Rosiana niantso hoe 'argamak ' ireo soavaly volom-bolo metaly mahaliana ireo, izay ny endrik'izy ireo dia mampatsiahy ny an'ny Turkmen mitovy an'i Persia. Nahasarika ny sain'ny Kuropatkin jeneraly rosiana iza no hisafidy ny sasany amin'ireto soavaly ireto atombohy ny fiompian'izy ireo ary na iza na iza izy ireo dia hanao batemy azy ireo amin'ny anaran'ny firazanana ankehitriny: Akhal-Teke.
Ankehitriny, manodidina ny valo alina ny isan'ity karazana ity voasoratra eto amin'izao tontolo izao. Amin'izy ireo, ny maro an'isa dia voasoratra anarana ao Turkménistan, izay nanjary tandindom-pirenena ireo equines ireo.
Na eo aza ny toetra mampiavaka azy amin'ny fanatanjahantena. mbola karazany tsy fahita firy ary tsy fahita firy aza. Na dia marina aza izany dia manomboka miely tsikelikely manerana ny firenena izy. Any Espana, ohatra, dia nitombo hatramin'ny 2007.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Akhal-Teke, ny firavaka ao Turkménistan